၄ သင်၏တင်ပြမှုစီမံခန့်ခွဲမှုနည်းဗျူဟာ (သို့) နည်းနေခြင်းသည်ဖြုန်းတီးသောအချိန်၊ အရင်းအမြစ်များနှင့်စီးပွားရေးဖြစ်သည် Martech Zone
ဒီတင်ဆက်မှုကိုအတူတူထားရန်သင်ကူညီနိုင်မလား။ ကျွန်တော့်အစည်းအဝေးကတစ်နာရီအတွင်းပါ။ ဆလိုက်ရှာမတွေ့ဘူး
$ #! * ဒါမှားနေတယ်။
အကျွမ်းတဝင်အသံလား ထိုအခါသင်သည်ထိရောက်သောတင်ဆက်မှုစီမံခန့်ခွဲမှုနည်းဗျူဟာကိုမသုံးပါ။ ထို့အပြင်ရလဒ်အနေနှင့်သင်သည်အချိန်၊ အရင်းအမြစ်များနှင့်စီးပွားရေးထက်ပိုရှုံးနိမ့်နေသည်။ ရောင်း ၀ ယ်သူတစ် ဦး သည်ဖောက်သည်တစ် ဦး နှင့်စကားပြောနေချိန်တွင်တင်ပြမှုစီမံခန့်ခွဲမှုကမှန်ကန်သောသတင်းစကားကိုအရေးအကြီးဆုံးသောအချိန်တွင်ဆက်သွယ်ကြောင်းသေချာစေသည်။ အဲဒီအစည်းအဝေးမှာဘာတွေဖြစ်လာသလဲ၊ မပါဘူးဆိုတာကအောက်ခြေလိုင်းကိုတိုက်ရိုက်အကျိုးသက်ရောက်တယ်။ ဒါဟာအနိုင်ရသို့မဟုတ်ရှုံးသည်။
တင်ပြစီမံခန့်ခွဲမှုသည်အနိုင်ရရှိသည်။ အဓိပ္ပါယ်ဖွင့်ဆိုချက်အရ၎င်းသည်တင်ဆက်မှုအတွက်အသုံးပြုသောဖိုင်အားလုံးကိုဖန်တီးခြင်း၊ သိုလှောင်ခြင်း၊ တင်ပြခြင်း၊ လက်တွေ့တွင်တင်ဆက်မှုစီမံခန့်ခွဲမှုသည်စျေးကွက်အတွက်အမှတ်တံဆိပ်နှင့်သတင်းစကားထိန်းချုပ်မှုကိုသေချာစေသည်။ အရောင်းအနေဖြင့်တင်ဆက်မှုအကြောင်းအရာကိုဖန်တီးရန်နှင့်မျှဝေရန်အတွက်ပိုမိုမြန်ဆန်လွယ်ကူစေသည်။
ခိုင်မာသောတင်ပြမှုစီမံခန့်ခွဲမှုနည်းဗျူဟာသည်သင်ဤအဖွဲ့များကိုလူတိုင်း၊ လုပ်ငန်းဆောင်တာများအနေဖြင့်၊ သူတို့၏ရည်မှန်းချက်ပန်းတိုင်များကိုပြည့်မီစေရန်ပိုမိုအကျိုးဖြစ်ထွန်းသောနှင့်ထိရောက်သောအမှားများကိုရှောင်ရှားရန်ကူညီလိမ့်မည်။
အရောင်းဝန်ထမ်းများသည်သူတို့၏အကြောင်းအရာများကိုမည်သည့်နေရာတွင်ရှာရမည်ကိုသိသည်ဟုယူဆပါ။ - ဒါဟာ S: အပေါ်အချို့သော၌မောင်းခဲ့သည် စျေးကွက်ရှာဖွေရေး Sharepoint ပေါ်က folder ကိုဖြစ်ဖြစ်၊ ဒါမှမဟုတ်ကြီးမားတဲ့ကြေငြာချက်တစ်ခုပါတဲ့ email အစုလိုက်အပြုံလိုက်ပို့လိုက်တာဖြစ်နိုင်တယ်။ ၎င်းဖိုင်သည်ကွန်ယက်တစ်ခု၊ လုပ်ငန်းခွင်တစ်ခုသို့မဟုတ် Inbox တစ်ခုတွင်မြှုပ်နှံခံရပြီး၎င်းတွင်မည်သည့်အရာမှချဲ့။ ကြည့်။ မရသည့်သန်းကြွယ်သူဌေးတစ် ဦး ၏ရှာပုံတော်ကိုတိုးချဲ့ရန်အဆင့်မြင့်ရှာဖွေရေးအင်္ဂါရပ်များမရှိပါ။ အစည်းအဝေးအသစ်တစ်ခုအတွက်ဖိုင်အသစ်တစ်ခုဖန်တီးရန်သို့မဟုတ်စိတ်ကြိုက်ပြင်ဆင်ရန်အတွက်မည်သည့်အသုံးအဆောင်မှမှအသုံးမပြုနိုင်ပါ။ တင်ပြမှုစီမံခန့်ခွဲမှုကနောက်ဆုံးပေါ်အကြောင်းအရာများကိုအရောင်းလူပုဂ္ဂိုလ်ရှေ့တွင်မှန်ကန်စွာဖော်ပြသည်။ ဒါဟာသတင်းစကားကိုလိုက်နာမှုသေချာ။
လူတိုင်းတွင်လိုက်ဖက်သည့်၊ နောက်ဆုံးပေါ်အကြောင်းအရာများရှိသည်ဟုယူဆပါ။ - အီးမေးလ်၊ Chatter feed သို့မဟုတ် status အစည်းအဝေးတွင်လူတိုင်းအားပိုမိုကောင်းမွန်သော၊ တရားဝင်အတည်ပြုထားသောမူကွဲတစ်ခုရှိကြောင်းလူတိုင်းကိုပြောခဲ့သည်။ ကံမကောင်းစွာပဲလူသားတွေဟာအလေ့အထတွေရဲ့သတ္တဝါတွေပဲ။ အရောင်းဝန်ထမ်းတစ် ဦး အတွက်အလေ့အကျင့်တစ်ခုကတော့မနေ့ကဖိုင်ကိုသူ့ desktop ပေါ်မှာထိုင်ပြီးပြန်လည်အသုံးပြုခြင်းဖြစ်သည်။ နောက်ဆုံးတွင်သူသည်၎င်းအကြောင်းအရာနှင့်အကျွမ်းတဝင်ရှိခဲ့ပြီးပြီးခဲ့သည့်အစည်းအဝေးအတွက်လည်းလုံလောက်ခဲ့သည်။ မှန်ကန်သောတင်ဆက်မှုစီမံခန့်ခွဲမှုဆိုင်ရာဖြေရှင်းချက်သည်ရောင်းသူအားသူ၏နောက်လာမည့်အစည်းအဝေးအတွက်ကုန်းပတ်အသစ်တစ်ခုဖန်တီးရန်လွယ်ကူစေပြီး၎င်းသည်သူ၏ desktop ပေါ်တွင်ထိုင်နေသောကုန်းပတ်ဟောင်းကိုသုံးသကဲ့သို့ဖြစ်လိမ့်မည်။ အချိန်ကိုသက်သာစေသည်
အရောင်းနှင့်ဆက်သွယ်ခြင်းမဟုတ် - လူတိုင်းသည်တူညီသောပန်းတိုင်သို့ ဦး တည်နေစဉ်အရောင်းနှင့်စျေးကွက်သည်ကွဲပြားသောစည်းကမ်းများဖြစ်သည်။ အရောင်းကောင်းသူတစ် ဦး သည်သူတို့၏အရေအတွက်ကိုရရှိရန်နှင့်ဝင်ငွေရရှိရန်ကြိုးစားနေသည်။ ကောင်းမွန်သောစျေးကွက်သမားသည်ကုမ္ပဏီ၏ထုတ်ကုန် / ၀ န်ဆောင်မှုပေးခြင်းနှင့်စာတိုပေးပို့ခြင်းမှတစ်ဆင့်ကုန်အမှတ်တံဆိပ်ပိုင်ဆိုင်မှုကိုတည်ဆောက်သည်။ တစ်ခုမှာရေတိုဖြစ်ပြီးနောက်တစ်ခုမှာရေရှည်ဖြစ်သည်။ နှစ် ဦး စလုံးကုမ္ပဏီ၏အောင်မြင်မှုအတွက်အရေးပါသည်။ စီးပွားရေးဆိုင်ရာလူမှုရေးလက္ခဏာများကို အသုံးပြု၍ တင်ဆက်မှုစီမံခန့်ခွဲမှုအဖြေသည်အရောင်းနှင့်စျေးကွက်ရှာဖွေရေးလုပ်ငန်းများကိုပေါင်းစည်းလိမ့်မည်။ ထို့ကြောင့်လူတိုင်းသည်ဗဟုသုတကိုအလိုအလျောက်မျှဝေနိုင်သည်၊ အချိန်နှင့်တပြေးညီမျှဝေနိုင်သည်။ ၎င်းသည် Win-Win တစ်ခုဖြစ်သည်။
တင်ဆက်မှုကိုဆက်သွယ်ရေးရောနှောခြင်းတွင်မပါ ၀ င်ခြင်း။ -
စျေးကွက်ရှာဖွေသူများသည်ပြီးပြည့်စုံသောလိုဂိုကိုဒီဇိုင်းဆွဲခြင်း၊ နေရာတစ်ခုဖန်တီးခြင်း၊ ဝက်ဘ်ဆိုက်များ၊ လက်ကမ်းစာစောင်များ၊ တီဗီအစက်အပြောက်များနှင့်အခြားကြော်ငြာနှင့်အပေါင်ပစ္စည်းများကိုဒေါ်လာဘီလီယံနှင့်ချီသုံးစွဲကြသည်။ လိုဂိုနှင့်တံဆိပ်ရိုက်။ ထို PowerPoint template ပေါ်တွင် Go, Go, Go …ရောင်း! အရောင်းဝန်ထမ်းတစ် ဦး ၏ပြောဆိုမှုနှင့်၎င်းတို့ပြောဆိုပုံသည်အနိုင်ရခြင်းနှင့်ဆုံးရှုံးခြင်းအကြားခြားနားချက်ဖြစ်သည်။ အရောင်းပြသခြင်းသည်အပေါင်ပစ္စည်းတစ်ခုဖြစ်သည်။ ၎င်းသည်ဆက်သွယ်ရေးရောနှောခြင်းတွင်၎င်း၏ကိုယ်ပိုင်ဒြပ်စင်တစ်ခုဖြစ်သည်။ ဒါဟာစျေးကွက်ရှာဖွေရေးနှင့်အရောင်းနှစ်ခုလုံးကနေပိုပြီးအာရုံစူးစိုက်မှုကိုခံထိုက်ပါတယ်။
တင်ဆက်မှုစီမံခန့်ခွဲမှုကကုမ္ပဏီ၏အကောင်းဆုံးအရင်းအမြစ်များသည်အရောင်းလူတစ် ဦး စီ၏အကြံဥာဏ်များဖြစ်ကြောင်းနှင့်စျေးကွက်ရှာဖွေရေးသူတိုင်းသည်သူတို့၏ရည်မှန်းချက်နှင့်တိုက်ရိုက်သက်ဆိုင်ကြောင်းသေချာစေသည်။ ၎င်းသည်မှန်ကန်တဲ့ရောင်းအားသတင်းစကားကိုရေးဆွဲခြင်းနှင့်အရောင်းလူများက၎င်းရဲ့အစည်းအဝေးများကိုတစ် ဦး ချင်းစီအတွက်မိနစ်ပိုင်းအတွင်း၊ နာရီများနှင့်သေချာပေါက်ရက်များကိုချိန်ညှိနိုင်ခြင်းကိုသေချာစေရန်ဖြစ်သည်။ အရောင်းတင်ဆက်မှုနှင့်ထိုတင်ပြချက်များကိုစျေးကွက်ထဲသို့ပေါင်းထည့်ခြင်းအားဖြင့်ကုမ္ပဏီသည်၎င်း၏စျေးကွက်မြှင့်တင်ရေးရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုကိုတိုးမြှင့်ခြင်းနှင့်၎င်းကိုအောက်ခြေလိုင်းသို့တိုက်ရိုက်လျှောက်ခြင်းဖြစ်သည်။
မွှေနှောက်ပါ သင်၏အဖွဲ့အစည်းအတွင်းရှိတင်ဆက်မှုများကိုဖန်တီးရန်၊ မျှဝေရန်နှင့်ထိန်းသိမ်းရန်အတွက်စျေးကွက်ရှာဖွေခြင်းနှင့်ရောင်းချခြင်းမှအသုံးချနိုင်သောဖိုင်စီမံခန့်ခွဲမှုစနစ်ဖြစ်သည်။